Ndi nkita choro uwe oyi
Oge oyi na-abịa n'oge adịghị anya, mgbe anyị yikwasịri n'ogige ntụrụndụ na uwe elu nke oge a, anyị na-echekwa - nkịta ọ chọrọ akwa mkpuchi n'oge oyi, kwa? Dị ka a na-achị n'ozuzu, a na-echebe nkịta buru ibu nke nwere akwa, akwa dị egwu site na oyi. Udiri anumanu dika Alaskan Malamutes, Newfoundlands, na Siberia Huskies, nwere ...
Gini mere nkita ji ata ahihia
Kedu ihe kpatara nkịta ji ata ahịhịa？ Mgbe gị na nkịta gị na-eje ije, oge ụfọdụ ị ga-ahụ ka nkịta gị na-ata ahịhịa. Agbanyeghị You na-azụ nkịta gị nri na-edozi ahụ juputara na ihe niile ha chọrọ ito na b ...
Otu esi ewepu mkpuru nke Cat
Otu esi ewepu mbọ nke Cat gị Cat Ngwọta ntu bụ akụkụ dị mkpa nke nlekọta cat gị mgbe niile. A pusi chọrọ mbọ ya mbọ ka ha ghara kewaa ma ọ bụ na-agbaji. Ọ bụ ihe na-arụpụta iwepụ isi ihe nke pusi gị ...